\_WelcomeTo QuljeedNet Awdal Home Contact Us About US <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 29-12-2012
Badheedhaha Quljeednet.com Reer Awdaloow Somaliland Ragbaa Idiin Matala Ama Ku Kalsoonaada Ama Kalsoonida Kala Noqda Isaaq Iyo Ciise Inaadse Xagxagataani Waxay Ka Dhigantahay Runta Oo Aad Iska Indha Tirsaan.
Cudurka Fardaheena gala, Yaan Laga Gubin Dameeraha Isaaq
Waar ma anagaa waalan mise cadanbaa laga heesayaa? Reer Awdaloow Somaliland maanta kama madhnidina waxad ku leedihiin xildhibaano wasiiro iyo madaxweyne ku xigeen iyo waliba masuuliyiin kale iyaga ayaana idin matala oo hadii la idinku xumeeyo somaliland dhexdeeda iyo hadii la idin wanaajiyaba waa guul ama guuldaro ay raga idin matalaayi iyagu idiin soo hooyeen. Waxana wanaagsan inaad labo mid yeeshaan hadii aad wax tabanaysaan oo ay dhab iniga tahay ficilka iyo qayla dhaanta aad la qarxaysaani Waxayna labadaasi arin kala yihiin
1) Inaad ragaa idin matala ee magaciina ku fadhiya kuraasta iska aamintaan oo wanaag iyo xumaan waxay idiin keenaanba aad ku kalsoonataan oo aanad cid kale xagxagan.
2) Ama waa inaad kalsoonida ragaa kala noqotaan oo aad caymadisaan kana goosataan iyaga, inta aanad somaliland iyo isaaqba isgaadhin.
Hadaad labadaa mid yeeshaan dee cid kale eersanmaysaan, laakiin dhibaatada ay nimankaa maamulka Soomaliland idiinku jiraayi idin gaadhsiiyaan maaha inaad Isaaq iyo Siilaanyo toona ku xagxagataan. Waxan isku madadaalinaa tolkayoow oo aan iskugu sheekaynaa inay nimankaasi yihiin kuwo shaqatagay laakiin ogsoonaada magaciina ayay ku shaqatageen, Isaaqna dawlada inaad kula jirto ayuu u arkaa wuuna kaa gar hayaa. Maanta manaafaqada reer Awal waxay gaadhay in hadii nin reer Awdal ah oo dawlada Siilaanyo kujira waxa uu qaldayo la tilmaamo in la yidhaa reer hebel ayaa loo jeedaa, ama waxan isnidhaa iskuna waaninaa inaga dhexdeena yaynaan wax iska sheegin, taasina waa daciifnimo iyo waliba manaafaqad qaawan ragna sidaa iskaga celin kari maysaan. Waayo hadii maalinwalba la dhawro nacaska ama ka laguu adeegsanayo ee maamulka markaajira kamidka ah dee ka beri soo fuulina dariiqaa uunbuu mari waligiina cabashadaa uunbaad ku jiraysaan.
Somaliland waa meel aan ku qasbanahay waana lama huraan nin diida iyo nin doonaba oo waadinkaa arkaya Axamad Ismaaciil Samatar aqoonyahankeenii weynaa ee soomali ku xiiqay 30 sano ee shalay kasii jeeday SL inuu dadkiisa baaqyada la qorayo kuna soo gurya noqonayo Somaliland. Runtuna way qadhaadhahay ee meeshani Somaliland waa lama huraan laakiin waxan aaminsanahay in xataa aan ku dhamaanee aan dhexdeeda ku mitidno waxna iska celino.
Balse sida wax la iskaga celinayi maaha in aan itaal moodno odayaal dhaqameed rayid ah oo hadal maahee aan wax kale garanayn oo aan siyaasad waxba ka garanayn oo aan qori qaad iyo abaan duule noqon karayn. Mana aha sida aan wax iskaga celin karnaayi Calanyar oo blue ah oo suuqyada Boorama lala or ordo iyo inaan Isaaqbaan Xamar ku cabsiinaynaa iskugu sheekayno.
Waxan had iyto jeer ku doodnaa in Somaliland cadka aan ku leenahay la inoo kordhiyo laakiin inta aan ku leenahay haday noqdaan wax tayo leh halkaa maanta ma joogneen. Markaa miyaanay wanaagsanayn inaan tiradaba iska dhaafno oo aan ku doodno rag aan anagu keensanay oo tayale ayaan dawlada ku darsanaynaa kuwan maanta joogana aan iridaha ka xidhano oo aan diidno inaan wax wada shaqayna la yeelano si loo soo wada caymadiyo.
Qof kasta waa ogyahay tayada ay leeyihiin raga maanta dawlada inoo matalaayi Isaaqna markuu kuwaa arko waxa uu inoo arkaa inaynaan haynba wax dhaama. Anigu waxan layaabanahay Siilaanyo waxa uu inaga xaqdhawrayo ee uu inoo dhawrayo hadii dadku caayayaana anigu waxan leehay thank you Mr Siilaanyo waayo dee Illaahay oo uu ka baqo mooyaane wax kale oo uu inoogu xishoba anigu ma garanayo rag inaga horjoogina ma jiraan.
Maanta Saylac waxa tagay ragii dawlada inoogujiray waanan ognahay inaanu Ciise waxba ragaa ka dhegaysanayn oo aanay ciise matalin laakiin sobobta ay u tageeni tahay inay xildhibaanada Reer Awdal cadaadis ku saaran inay maayarka udaayaan Ciise. Ragaasi berina waxay ku soo laabanayaan Boorama oo ay si nabada ku dhex mushaaxi doonaan iyaga oo waliba idiin dawladaynaya. Bal markaa maxaa lagaga cabanayaa Siilaanyo iyo Isaaq ama ciise.
Ciise Baarlamanka Somaliland waxa kaga jira 1 xildhibaan halkii xildhibaana waan aragnay siduu dadkii uu matalayay udifaacayay waajibkiisa ayuuna gudanayay oo anigu cay uma arko balse kuwaagii reer Awdaloow ma xiniinyahaa laga saaray saw doqoniimo iyo iyaga oo og inaanay cidiba wax ka qaadi karin maaha waxa ay la aamusanyihiin ee ay waliba iyagu arinta Saylaca ugaga horaynayaan dadka kale.
Waxan u malaynayaa Isaaq iyo ciisa cayga iyo siilaanyo wax ka sheegida iyo qoraalada xamasadaysan ee guryaha dhexdooda laga soo qorayo in ay reer Awdal xaraaro u qabato.
Rageena ugu geesisani waxay noqdeen oday dhqameedyo, waxanan isku madadaalinaa oday hebel quxu yidhi, iyo Ma maqlaysay siduu oday hebel u hadlay? Hadaba xaalku intuu sidaayahay yaynaan is wareerin wixii la inoo garto iyo sidii la inoo garto aan iska ogolaano yaynaanse cudurka Fardaheena gala Dameeraha Isaaq ka gubin.